Hiran State - News: Qilaafka labada Shariif oo la xaqiijiyey iney galaafteen nolosha kumanaan Somali ah.
Qilaafka labada Shariif oo la xaqiijiyey iney galaafteen nolosha kumanaan Somali ah.
Somalia:(hiranstate.com)-Shacabka Somaliyeed markasta oo dowlad la soo dhiso waxey rajo ka qabaan in la helo nidaam iyo kala danbeyn si ay u maareeyaan nolosha caruurtooda iyo mida waalidkood maadama lagu soo jiray mudo colaad.
Nasiib daro dowladba dowlada ka danbeysa waxuu waqtiga ka dhamadaa iyadoo lugaha isku dhegan iskaba daa wax ay shacabka u tartee. waxaad maqleysaa maalinkasta gobolada dalka qeybo ka mid waxaa gaajo iyo haraad ugu dhimanayo caruur iyo waayeel. waxaad maqleysaa maanta waxaa gacan iyo lug laga gooyey dhalinyaro Somaliyeed iyadoo ay xukunkaas magalada Mogdisho ka fuliyeen kooxda Shabaab.
Dhinaca kale waxaad maalinkasta maqleysaa qilaaf soo kala dhex galay labada Shariif iyo waxaa la heshiisiinayaa labada Shariif taasi oo shacabka dan yarta ah ee aan awoodin iney noloshooda maareeyaan amaba aan mushaar ka helin beesha caalamka Sida Labada Shariif si ay caruurtooda wax ugu bartaan ayaa maalin iyo habeen isweydiinayo waxa isku dirayo labada Shariif maadaama ninkasta meel loo saaray nolol ku filan iyo ciidamo ka socda Africa oo nabad galyadooda sugayo, mar hadii bishii mushaar ku filan la siiyo caruurtooduna wax u bartaan guryo qur qurxana ka iibsadeen wadanka dibadiisa maxaa u diidayo iney shacabka u tanaasulaan waqtiga yar ee uga harsan mudadooda ayey leeyahiin shacabka aan maanta heysan awood ay ku hadlaan.
Qaabka ay TFGdu u shaqeyso iyo sida loogu tumanayo xuquuqda muwaadiniinta Somaliyeed.
Waxaan inta badan maqalnaa xukumada Farmaajo waxey la dagaalantaa musuq maasuqa waxeyna mushaar siisaa ciidamda Somaliya. hadaba waxaa isweydiin leh musuq maasuqa ay la dagaalanto xukumada Farmaajo yey kala dagalantaa,ma masuuliyiinta dowlada mise waxey ka taliyaan wadanka aanu aragno mid aan aheyn?
Arimaha aan haba yaraatee ilaa hada wax laga qaban karin oo TFGda caan ku tahay waxaa ka mid ah in ay dadka u qoraan Check ayey hadane inta uusan qofku gaarin Bankigii ay u direen ayey telefon ka daba dirayaan kedibna waxey ku amrayaan shaqaalaha Bank iney dadka u sheegaan ineysan lacag oolin wadanka. hadaba waa yaabe maxaa qofka loo daalinayaa oo waqti iyo hami loo galinayaa? maa sidey diintu na fareyso amaba cadaaladu ku jirto qofka la yiraahdo waxba laguuma heli karo.
Dhinaca ciidamda dowlada
Magaalada Mogdisho waxaa ka jiro ciidamo loogu yeero ciidamada qaranka laakinse u dhisan qaab qabiil. sargaalkasta oo ciidamada horjooge u ah waxuu heystaa liis ilaa dhowr kun ah isagoo dowlada uga qaata inuu hogaamiyo ciidamo aan la arkin tiro ahaan markastana laga dhawaajiyo iney difaac kaka jiraan meel hebel kedibna aan waligood la arag iyagoo hal meel wada jooga, ujeedaduna waa dhaqaalo ku hela iyo wax la mid ah.
Maxaad kala socotaa qaabka loola macaamilo ciidamda dagaalada ka wada gobolada dalka qaarkood.
Ciidmada ku sugan Gedo hada waxoogaa noloshooda wax badan ayaa iska bedelay kedib markii uu dhawaantaan idaacadaha ka sheegay sargaal degaanadaasi ka soo jeeda ineysan wax mushaar ah ka helin TFGda laakinse ay jecel yahiin iney guusha la sheegtaan shacabka Gedo halka aysan u soo gurman marka ay dagaalka iyo abaaraha ku jiraan.Nasiib wanaag Wasiirka 1aad arintaasi wax badan ayuu ka qabtay qaabka loo saacidayne waxaanu ku soo qaadan doonaa qoraaladeena danbe.
Ciidamda ka dagaalama Hiiraan iyo sida loola dhaqmo maxaad kala socotaa inteese la eg tahay caawinaada iyo xiriirka kala dhaxeeya TFGda. Hiiraan waxaa jooga ciidamo hadii ay TFGda caawiso iyo hadii kaleba dagaal kala soo horjeeda kooxaha halkaasi ku sugan.masuuliyiinta TFGda iyo inta reer Hiiraan u metesha dowladane uma arkaan in ciidamadaasi ay yahiin ciidamo Somaliyeed oo xaq u leh iney helaan taakuleynta ay TFGdu la garab taagan tahay kuwa dalka intiisa kale ku sugan. Madaxweynaha Somaliya Shaiikh Shariif waxuu madadaalo iyo af gobaadsi ku hayaa maalin iyo habeen madaxweynaha Hiiraan State. halka Farmaajona uu madadaalinayo amaba isbuuc hebel ika war suga ku hayo xildhibaanada reer Hiiraan qaarkood.
Su'aashu waxey tahay maxaa diiday in la caawiyo ciidamo maalinkii ay dalka yimaadeen Shabaab ilaa maanta dagaal ku jira xitaa wadanka oo dhan oo usan dagaal ka socon iyagu diyaar u ah iney degaanadooda ka xoreystaan kooxahaan, halka Mogdisho saraakiil ciidamo been ah oo dhawr kun ah inta qorteen mushaar lagu siiyo ciidan aan jirin?.
Dhawaantan ayey aheyd markii laga soo xigtay sarkaal ka tirsan Shabaabka Hiiraan isagoo leh hadii aysan Hiiraan joogin ciidamo markasta dagaal ku soo qaadayo magaalada Belet weyn iney qabsan lahaayeen Mogdisho amaba ugu yaraan maamul goboleedka Puntland, taasina waxey ku tusineysaa in ciidamada Hiiraan ka dagaalama yahiin kuwa sida rasmiga ah ugu baahan in loo dhameystiro waxiiba ay u baahan yahiin ciidan dagaal ku jira.
Inkastoo shaki badan la galiyey in xukumadani wax badan qaban karto inta uu soo noq noqonayo qilafka micno darada ah ee labada Shariif halka Farmaajona qilaafkooda ka faa'ideysanayo oo u hada u soo jeestay mudada u harsan sidii uu degaanada ay reerkiisu ka soo jeedaan u xoreysan lahaa isagoo awooda dowlada isticmaalayo. sida muuqata dalka Somaliya waxaa ka socda ruwaayad aysan dadku badankood fahmi karin tiro yar maahane.
· admin on April 23 2011 11:45:13 · 0 Comments · 2351 Reads ·
14,568,541 unique visits